14/05/2020 – Asian Harm Reduction Network (AHRN)
14/05/2020 by AHRN IT Posted in Activities
ကသာဆေးရုံနှင့် အင်းတော်ဆေးရုံသို့ AHRN-အင်းတော်စီမံကိန်းမှ ဝန်ထမ်းများမှ Face Shield ပြုလုပ် လှူဒါန်းခြင်း။
အင်းတော်မြို့နယ်နှင့် ကသာမြို့နယ်အပါအဝင် AHRN အင်းတော်စီမံကိန်းမှ ဝန်ထမ်းများသည် ကိုယ်တိုင်လုပ် Face shield အခု ၃၀၀ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအထဲမှ Covid 19 ‌ရောဂါကာကွယ်ရန် အတွက် ကသာဆေးရုံနှင့် အင်းတော်ဆေးရုံကို Face shield အခု ၁၀၀ စီ လှူခဲ့ပြီး AHRN စီမံကိန်းတွင်သုံးရန် အခု ၁၀၀ ရှိပါသည်။ AHRN ဝန်ထမ်းများသည် မိမိကိုယ်ကိုယ် ကာကွယ်ခြင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုသိရှိပြီး ရောဂါကာကွယ်ရေး နည်းလမ်းများကို တိတိကျကျလိုက်နာပါသည်။ အင်းတော် AHRN ဝန်ထမ်းများသည် လိုအပ်သူများကို လှူဒါန်းရခြင်းအတွက်လည်း အလွန်ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါသည်။
AHRN- အင်းတော် ကို Access to Health Fund မှ ပံ့ပိုးကူညီသည်။***********************************************************************
AHRN staff from Indaw Project made 300 hand-made face shields and donated 100 face shields to Katha General Hospital and 100 face shields to Indaw General Hospital for the prevention measures of Covid 19. Indaw Project have 100 face shields left for the project use.
AHRN staff know the value of personal protection and proof to follow infection control measures strictly. We are also very proud of our Indaw Team and are happy to be able to donate essential protection material to those who need it.
AHRN-Indaw project is funded by Access to Health Fund.